China AUMAN EST-A ifektri abakhiqizi | Izithombe
I-FOTON AUMAN EST Flagship Truck yokuhamba isikhathi eside
Imodi yeDrayivu 4 * 2/6 * 4/6 * 2R
Isivinini esikhulu 106/110 km / h
Ukumiswa Ukuhlola emoyeni
Oluvala amasondo langaphambili 6.5T
Ugandaganda osindayo wemakethe yezimpahla ezisezingeni eliphakeme, wenziwa ngokuhlanganyela yiFoton, BFDA kanye neCummins ngokuya ngemizamo yeminyaka emi-4 eYurophu kanye nokuhlolwa komgwaqo okuyizigidi eziyi-10 million.
I-Foton Cummins Engine
Ukufuduswa kwe-11L ne-12L
Kufika kokukhipha amandla kwe-490hp kanye ne-2,300Nm esiphezulu sokukhishwa kwe-torque
Ngokushesha ukuqala, ukudilika bese ukudlula
Ukuhlangabezana nezimfuneko ezimweni zokusebenza okuhlukahlukene
Kuhola imishini yokuphepha esebenzayo
I-disc brake ifaka ukuzinza okungcono kokushisa, ukusebenza kahle kwe-wading nemisebe esheshayo. High amandla engine kokucindezelwa wazihlephula ubuchwepheshe: kufika ku 370pas esiphezulu unyathela amabhuleki.
Hlangana noMthethonqubo oqinile kakhulu we-Collison
Isakhiwo nezinto zokwakha zomzimba omusha omusha wamandla aphezulu zenzelwe ukulingiswa kweCAE kusho ukuhlangabezana nomthetho wokushayisana oqinile weECER-29-03 nokufeza ukuphepha kokushayela okuphezulu.
Injini enokufuduka okuphezulu ne-torque ephezulu ngejubane eliphansi, ukudluliswa kwe-AMT, ne-asi ye-speed engemuva yesilinganiso sejubane eliphansi ifaniswe kahle ukuthuthukisa ukusebenza kahle kwedrayivu ngama-2%.
Yonke ipulatifomu entsha eyakhiwe ngobuchwepheshe obuholayo base-Europe futhi ithuthukisa amaloli asindayo asezingeni eliphakeme futhi alungele imvelo ngemizamo ehlangene neDaimler neBenz ngokuya ngezinga elijwayelekile le-R & D laseJalimane; amamojula amakhulu wokwakha abiwa yizo zonke amaloli anemithwalo esindayo ngokususelwa kwiBenz SFTP ukuqinisekisa ikhwalithi yeloli. I-chassis enepulatifomu entsha sha nesakhiwo esilungiselelwe yamukela kabanzi izinto ezintsha nobuchwepheshe ukunciphisa isisindo esifile nokugcina
I-chassis enepulatifomu entsha sha nesakhiwo esilungiselelwe yamukela kabanzi izinto ezintsha nobuchwepheshe ukunciphisa isisindo esifile nokugcina uphethiloli omningi ngokususelwa kunqubo yokuphepha yaseYurophu.